အလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ်ပေါင်းစည်းမှုလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပါဝါကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » အလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ်ပေါင်းစည်းမှုလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပါဝါကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ
ဖဲရ်ဖီးလ်, NJ - အောက်တိုဘာ 31, 2017 - စီးပွားဖြစ်နှင့်လူနေအိမ်စျေးကွက်များအတွက်သမာဓိအာရုံစူးစိုက်ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှုကိုအပေါ်သို့အဆောက်အအုံ, အလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းဌာနသို့င်း၏လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အာဏာထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကိုပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ။ အဆိုပါပေါင်းစပ်ယူနစ်ဆန်းသစ်နှင့်စျေးကွက်-ဦးဆောင်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူပေါင်းစည်းမှုနှင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်စိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းရေးအပေါ်အာရုံစိုက်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ပါဝါ - အသစ်ဌာနဖြစ်သူ Scott Lowder, ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာကဦးဆောင်လိမ့်မည်။
"ဖောက်သည်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းအလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ်ပါဝါအသင်း၏အဓိကအာရုံစိုက်သည်, ငါတို့သည်ဤလောကအတွက်အရည်အချင်းအရှိဆုံးအတိုင်ပင်ခံ, အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ပေါင်းစည်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကံကောင်းနေကြတယ်" ဟု Lowder ကဆိုသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းကလျင်မြန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ရရှိရန်တတ်နိုင်သမျှ leanly လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် "နည်းပညာ၏အရှိန်အဟုန်ကြောင့်ရှုပ်ထွေးထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြာအချိန်ကိုအတူကအရေးကြီးသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆိုပါမျှော်လင့်ထား End-user အတွေ့အကြုံကိုကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တီထွင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလုပ်လုပ်နေကြသောပါရမီအင်ဂျင်နီယာများအကြားချောမွေ့စွာ link ကိုဖန်တီးဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ "
Lowder မျိုးစုံမူပိုင်ခွင့်ချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုအသိုင်းအဝိုင်းအားဝတျပွုခဲ့ပွီဟုအစွမ်းထက်ဖြေရှင်းချက်သို့စျေးကွက်ပြဿနာများ converting အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ်ပူးပေါင်းမတိုင်မီကသူထက်ပိုမို 10 နှစ်ပေါင်းလုံခြုံရေးဖြေရှင်းနည်းများစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ASSA ABLOY အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူကကော်နက်တီတက္ကသိုလ်ကနေစက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့, ဖဲရ်ဖီးလ်တက္ကသိုလ်ကနေလစ်ဘရယ်အနုပညာအတွက်ဘွဲ့ရရှိထားသူများနှင့် Connecticut တက္ကသိုလ်ကနေဘဏ္ဍာရေးနှင့်စျေးကွက်ထောက်လှမ်းရေးအတွက် MBA ဘွဲ့။
အလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ်ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.middleatlantic.com.
အလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ်ကုန်ပစ္စည်းများ 2011 အတွက်၎င်း၏ဝယ်ယူကတည်းက Legrand ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
Legrand နှင့် Legrand, မြောက်အမေရိက & အမေရိကအလယ်ပိုင်းအကြောင်း
Legrand လျှပ်စစ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆောက်အဦအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအထူးကုဖြစ်ပါတယ်။ , စီးပွားဖြစ်စက်မှုဇုန်နှင့်လူနေအိမ်စျေးကွက်များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏ပြည့်စုံသောပူဇော်သက္ကာကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖောက်သည်များအတွက်အခြေခံစံနှုန်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ မြင့်မားသောဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးသစ်ကိုထုတ်ကုန်များ၏ပုံမှန်စီးဆင်းမှုများအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု Legrand ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Eliot (လျှပ်စစ်နှင့် IoT) အစီအစဉ်များမှအထူးသဖြင့်, connected devices များအပါအဝင်ကြီးထွားမှုအတွက်အဓိကအားနည်းချက်ကိုဖြစ်ပါသည်။ Legrand 5.6 အတွက် $ 2016 ဘီလီယံရောင်းအားကဖော်ပြခဲ့သည်။ Legrand AFCO စနစ်များ, C2G, Cablofil, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, Da-Lite ကို, Electrorack, Finelite, Luxul, အလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ်ထုတ်ကုန်များ, Nuvo, ပါဝငျသောလူသိများတဲ့စျေးကွက်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်လိုင်းများတစ်အစုစုနှင့်အတူ, မြောက်အမေရိကနှင့် Central America မှာအားကြီးသောရှိနေခြင်းရှိပါတယ် တွင်-မေး, Ortronics, Pass ကို & Seymour, အထွတ်အထိပ်, QMotion, Quiktron, Raritan, Sanus, Solarfective, Vaddio, Vantage, Wattstopper နှင့် Wiremold OCL ။ Legrand Euronext ပဲရစ်အပေါ်စာရင်းနှင့် CAC40, FTSE4Good, MSCI ကမ္ဘာ့, ASPI, ကော်ပိုရိတ် Oekom ခဲ့သည် Rating နှင့် DJSI (ISIN ကုဒ် FR0010307819) အပါအဝင်အညွှန်းကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစတော့ရှယ်ယာဖြစ်ပါသည် www.legrand.com.
PR စနစ် Link ကို: www.ingearpr.com/MAP/171031MAP.docx
ဓာတ်ပုံ Links များ: www.ingearpr.com/MAP/MAP_Scott_Lowder.jpg
ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောအားလုံးကုမ္ပဏီနှင့်ထုတ်ကုန်အမည်များအမှတ်တံဆိပ်နှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20Merges%20Electrical%20Engineering%20and%20Power%20Product%20Management%20Teams%20%23AVTweeps%20-%20http://bit.ly/2iLWITY
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/middle-atlantic-products-inc
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ပေါင်းစည်းမှု အလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ် Power ကကုန်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များ SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows	2017-10-31
ယခင်: Wohler TIMES NOW က AMP1-8-M ပေး Audio မော်နီတာနှင့်အတူ HD ကိုမှ Upgrade ကူညီပေး
နောက်တစ်ခု: ကုန်ပစ္စည်း Spotlight ကို: Wohler Technologies- အဆိုပါ AMP1-8-M ပေး Audio ု့ကပ်ရေး